လေနုအေး: April နွေရယ် တန်ခူးရယ်
အမ.. မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ခေါင်းမာ တာ ဇွတ်လုပ်တာ စာပေပိုးပါတာတွေ.. မှန်တယ်ထင်ရင် ပြောတတ်တာတွေက အတူတူပဲ..။ အမက စာရေးတော်တယ်။ မိုက်တယ်။ အတွေးအခေါ်တွေက ငယ်ငယ်ကနဲ့ မတူ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ။
Happy Belated Birthday ပါ တန်ခူးရေ...ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို ချစ်သော မောင်၊ ချစ်သော သားငယ်လေးနဲ့ အတူတူ ကြုံတွေ့ နိုင်ပါစေ။
ငယ်ငယ်က စိတ်ကူးယဉ်ဘူးတဲ့ ဘ၀တခုက ဆေးပြယ်သွားတဲ့ ပန်းချီကားဖြစ်သွားပေမယ့် အခုလက်ရှိဘ၀မှာလည်း ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်ရဦးပေမပေါ့။ တန်ခူးအတွက် ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ နဲ့ တန်ခူးတို့ မိသားစု ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေ ပါစေ :)
ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်တဲ့ဘဝတော့ လိုချင်သား ကိုပေါရေ။ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ခေါင်းမာတယ် ဆိုတာ ခံယူချက် ရဲရင့်တာပါ။
ဇွတ်လုပ်တယ် ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားတာပါ။
နှစ်ခုစလုံးဟာ အမှားဘက်မှာ အားသန်မယ်ဆိုရင် ရင်လေးစရာ ဆိုပေမယ့် စာပေ၀ါဒနာပါတဲ့ စာကြမ်းပိုး တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှားအမှန်ကို ကောင်းကောင်း ခွဲခြားသိနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိတော့ အထက်က စိတ်ဓါတ်နှစ်ခုလုံးဟာ အောင်မြင်မှုအတွက် တွန်းအားတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ် ချစ်သောသူများနှင့် မခွဲမခွာ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ရာသက်ပန် နေထိုင်သွားနိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အေးချမ်းမှုများစွာနဲ့ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုနိုင်ပါစေ။
Hayyp Thingyan!! Happy Birhtday!!
လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ ကိုပီကေ။ နောက်လဲ အမြဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးနှစ်ထပ်ပါ။
same to youပါကောင်းကင်ကို။
ဘလော့ မိတ် ဆွေ တယောက် တိုး သွား တယ်ပေါ့နော်။ လာ အားပေး တာ ကျေးဇူး အထူး။ မိသားစု လေးတခု ကို..ဖတ်ရှူ ကြည်နူးမိပါတယ်။ စာတို ငညို ချင်း လဲ တူတယ်။း)
အဟောင်းတွေ အားလုံးလိုက်ဖတ်နေတာ အစ်မရေ့ မွေးနေ့ ပို့ စ်လေးကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ရေးထားတာ တော်တော်ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် ။
ပို့ စ်အဟောင်းက ကော်မန့် တွေကို ခုမှ လိုက်ကြည့်ဖြစ်ရင်း မကေ နဲ့မောင်မျိုး ကော်မန့် လေးတွေ ခုမှ တွေ့ တယ်… ပြန်တာ အတော် နောက်ကျလို့ခွင့်လွတ်ပါနော်…
မကေကို စဖတ်ထဲက ခင်ပြီး မိတ်ဆွေတော်နှင့်ပြီးသားပါ…
မောင်မျိုးရေ အဟောင်းတွေကို ပြန်ဖတ်ပြီး ခုလို တခုတ်တရ ကော်မန့် ပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်…